“နိုင်ငံပေါင်း ၄ နိုင်ငံက ကြက်တောင်မယ်တွေကို နိုင်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲတွက်သွားတဲ့ မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ”
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ ဟာ ဆိုရင် အခုချိန် ဂရိနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဟယ်လက်စ်အိုးပင်း (Hellas Open ) ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း (၄) နိုင်ငံ က ကြက်တောင်မယ်တွေကို အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ခြေအဆင့်(၃) သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ ကြက်တောင်မယ် […]
အံသြလောက်ဖွယ် ရုတ်တရက် ရေတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်
အံသြလောက်ဖွယ် ရုတ်တရက် ရေတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် ပြင်ဦးလွင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်တွင် ယနေ့ မွန်းလွဲမှစကာ ရေကျစီးဆင်းမှု မရှိတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်. ..Win Naing Zaw ဆိုတဲ့ Fb အကောင့် ပိုင်ရှင်က တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ ဓါတ်တော် ချိုင့်ရေတံခွန်တွင် […]
ရေးမြို့​နောက်​ဆုံး အ​ခြေအ​နေ…..90%မြုပ်​ကုန်​ပြီ ရေးမြို့​နောက်​ဆုံး အ​ခြေ အ​နေ….. . မိုးရယ်​ တိတ်​ပါ​တော့….😢 . ​ရေးမြို့ 90%ြ မုပ်​ကုန်​ပြီ…😢 Credit – thutaw ရေးမြို့​နောက်​ဆုံး အ​ခြေအ​နေ…..90%မြုပ်​ကုန်​ပြီ ရေးမြို့​နောက်​ဆုံး အ​ခြေ အ​နေ….. . မိုးရယ်​ တိတ်​ပါ​တော့….😢 […]
မွန်ပြည်နယ် ရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် သိန်း(၁၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကျော်သူနဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်
မွန်ပြည်နယ် ရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် သိန်း(၁၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကျော်သူနဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရေးမြို့ဆိုရင် တစိမြို့လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးခံနေရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ […]
မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးဒုက္ခရောက် အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ အတွက် အိမ်ထောင် တစု ၃၃၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် သိန်း ၁၂၅၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကိုကျော်မင်း + မသီသီလွင် (ရွှေပြည်နန်း မိသားစု)
မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးဒုက္ခရောက် အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ အတွက် အိမ်ထောင် တစု ၃၃၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် သိန်း ၁၂၅၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကိုကျော်မင်း + မသီသီလွင် (ရွှေပြည်နန်း မိသားစု) လက်ရှိပြည်တွင်းရေကြီးမှုကတော့ သာမာန်ထက် ပိုမိုစိုးရွားလျှက်ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။ ရေကြီးမှုကြောင့် နေအိမ်များနစ်မြုပ်ခြင်း မြေပြိုခြင်းတွေနဲ့အတူ လူသေဆုံးမှုတွေလည်း […]
“ရေဘေးသင့်နေသော မွန်ပြည်နယ်အတွက် ဆေးခန်း သင်္ဘော လာပြီိ”
မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ရာမှာ အဆင်ပြေစေဖ္ခို အတွက် ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေး ရေယာဉ်တစ်စီးကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Yangon Water Bus ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ယနေ့မနက်က ကြေညာပေးခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ရေယာဉ်တစ်စီးကို လှူဒါန်းတာကို ဆေးရုံသင်္ဘောပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးရုံသင်္ဘော အနေနဲ့ ထားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် လူနာတွေ […]
“ရေဘေးသွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ပါက အားမနာတမ်း ကားမျိုးစုံ အကူအညီတောင်းရန်”
ရေဘေး သွားရောက် လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ပါက အားမနာတမ်း အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့ ရွှေကဆုန်ယန္တရား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ ရေဘေး သွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ချက်ရှိပါက ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ်။ အားမနာတမ်း အကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်များ ရွှေကဆုန်ယန္တရား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှ ရေဘေးသင့်ဒေသများကို ဆန်နှင့်စားသောက်ကုန်များ သွားရောက်လှူတန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ချက်ရှိပါက (6ဘီး, 10ဘီး, […]
အသည်းကွဲပြီး ဘဝကို အရူံးပေးချင်သူတွေ စာဆုံးအောင်ဖတ်ပါ
အသည်းကွဲပြီး ဘဝကို အရူံးပေးချင်သူတွေ စာဆုံးအောင်ဖတ်ပါ သူ့ကြောင့် သေချင်လောက်တဲ့အထိ ခံစားဖူးသလား? ငါသေသွားရင် သူတော့ နောင်တတွေနဲ့ ဆက်အသက်ရှင်နေမှာပဲလို့ရော တွေးဖူးသလား? အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် အသဲကွဲတာ ကိုယ့်အပြစ် မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအလွမ်းတွေ နာကျင်ခြင်းတွေထဲကနေ အချိန်တစ်ခုကြာလာသည်အထိ ရုန်းမထွက်နိုင် လွတ်မချနိုင်သေးတာကတော့ ကိုယ့်အပြစ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ခံစားပါ ဒါပေမယ့် […]
အမှတ်ပေးစနစ်မပါဘဲ အရှုံး၊ အနိုင်မပေါ်မခြင်း ထိုးသတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဒေ့ဗ်ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း
အမှတ်ပေးစနစ်မပါဘဲ အရှုံး၊ အနိုင်မပေါ်မခြင်း ထိုးသတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဒေ့ဗ်ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း မြန်မာပြည်လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံဟောင်း ထွန်းထွန်းမင်းဟာ ကနေဒါနိုင်ငံဖွား ဒေ့ဗ် (ခေါ်) ဒေ၀ကို အမှတ်ပေးစနစ် မပါဘဲ အရှုံး၊ အနိုင်မပေါ်မခြင်း ထိုးသတ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သု့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ တစ်ဆင့် တရားဝင်စိန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းမင်းဟာ […]
မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့တို့အတွက် 23.6.2019 နေ့ ညနေတွင် ကြိုပြခဲ့တဲ့ နမိတ်
မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့တို့အတွက် 23.6.2019 နေ့ ညနေတွင် ကြိုပြခဲ့တဲ့ နမိတ် အထူးသတိ​ပေးချက်​ မွန်​ပြည်​နယ်​ ​မော်​လမြိုင်​မြို့နဲ့ ​ရေး မြို့ တို့ရဲ့ အ​နောက်​ဖက်​ ​ကောင်းကင်​ပြင်​မှာ ယ​နေ့ (23.6.2019)ရက်​​နေ့ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်​ နဲ့ […]